Ururka Horumarinta Soomalida Itoobiya Ee Jaaliyada UK Oo Shir Ay Kaga Qayb Qaadanayeen Dhismaha Biyo Xidheenka Wayn Ee Abay ku Yeeshay Magaladada London. - Cakaara News
London(CN) Sabti.Oct.11.2014, Waxaa magaalada London lagu qabtay shir uu soo agaasimay ururka hormarinta Somalida Itoobiya kadhacay hoolka safaarada Itoobiya ay ku leedahay London, taasoo ay ka soo qeybgaleen masuuliyiin sare oo uu kamid yahay safiirka Itoobiya u fadhiya Ingiriiska Mudane Ambassador Berhanu Kebede oo Xaflaadaasi daah furay aadna uga mahad celiyay jaaliyada DDSI.
Wuxuuna sheegay safiirku in ay tahay jaaliyadaha Itoobiya kuwa ugu horeeya oo ka qeybqaata hormarka iyo nabadgalyada.
Ambassador Berhanu Kebede ayaa sheegay in uu aad ugu farax sanyahay Ururka Hormarinta Somalida Itoobiya oo maanta ay kubixinayaan kaarar dadkii iska diwaan galiyay islamarkaana ay bixinayaan 40 kaar taaso ay sharaf weyn u tahay safaarada in uu isagu bixiyo kararkaasi.
Isgoo ku hadlaya magaca safaarada ayuu uu mahad celiyay masuuliyiinta Jaaliyadda sida quruxda badan ee ay markasta u wargaliyaan hawlahooda taageero ee ay wax ugu qabanayaan bulshadooda iyadoo ay garab taagan tahay safaarada Itoobiya markasta.
Gudoomiyaha ururka hormarinta Somalida Itoobiya Marwo Sacdiya Cabaas ayaa aad uga mahad celisay marti sharaftii shirka ka soo qeybgashay iyo sida ay uga qeybqaateen Ururka Hormarinta Somalida Itoobiya hawlaha loo aas aasay ee horumarka ah.
Waxaa kaloo halkaasi ka hadlay masuuliyiin ka tirsan Jaaliyadda DDSI oo booqasho ku tagay DDSI, halkaas oo ay kaga warbixiyeen horumarka ka taabogalay Deegaanka iyo sida ay muhiim u tahay in ay qurbajoogta u dhalatay deegaankau ay uga qayb qaataan horumarka islamarkaana ay soo arkaan.